बिहिवार, जेठ ५, २०७९ ०२:४२:११ युनिकोड
मिस नेपालको विरासत ? आइतवार, चैत्र २, २०७६ 1377
खुश्बुलाई २ वर्ष कैद आइतवार, चैत्र २, २०७६ 882
गायनमा संजीवको लोकप्रियता मंगलबार, फाल्गुन २७, २०७६ 498
चलचित्रको कथा नै प्रधान कुनै पनि परिवर्तनहरु राम्रो हुनको लागि चलचित्रको कथा राम्रो हुनै पर्दछ । र, सकारात्मक परिवर्तनहरुलाई संयमित भएर व्यबस्थापन गर्न सकेमा त्यस्ता परिवर्तनहरुले समाजमा अर्थ राख्ने गर्दछ । अन्यथा परिवर्तनको नाममा अराजकता मात्र फैल्याउने कामलाई परिवर्तन कदापी मान्न संिकंदैन । समग्रमा हेर्दा लूटपछि देखिएको परिवर्तनलाई बिभिन्न कोणको संकेतको रुपमा ग्रहण गर्न कठीन मानिएको छ । मंगलबार, फाल्गुन २७, २०७६
चलचित्रमा निर्माण, बितरण र प्रदर्शन सबल बन्नै पर्नेहुन्छ यतिखेर नेपाली चलचित्र उद्योगको अवस्था केही आशावादी छ । चलचित्रहरु केही भए पनि चल्न थालेका छन् भने प्रविधिको प्रभाव सँगसँगै उद्योग केही सकारात्मक बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ । जतिखेर चलचित्र चल्छन् त्यतिखेर चलचित्र उद्योग पनि आशावादी बन्छ । चलचित्र उद्योगको कर्मसँग धेरै पक्ष जोडिए पनि विकासको मूल रुप भनेको चलचित्र चल्नुमै देखिन्छ । मंगलबार, फाल्गुन २७, २०७६
चलचित्रको कथा ! यतिबेला नेपाली चलचित्रहरुमा प्रयोग गरिने चलचित्रको विषय, भाषा र कथ्यमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ । र, पात्र चयनमा पनि रियालास्टिक हुने तर्खरमा थिएटर आर्टिष्ट खोज्ने परंम्पराको शुरुवाट देखिएको छ । शुक्रवार, फाल्गुन १६, २०७६
फुर्के चलचित्र निर्माता ? यसै साता आशावादी मानिएका दुई चलचित्र प्रदर्शनमा आए – सेल्फी किङ र साङ्लो । फिल्मको जनरालाई आधार मान्ने हो भने सेल्फी किङ मल्टीप्लेक्स केन्द्ति थियो भने साङ्लो सिङ्गल थिएटर । भयो पनि त्यस्तै । प्राय सिङ्गल थिएटरमा साङ्लो देखियो भने सबै जसो मल्टीप्लेक्समा सेल्फी किङ । बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६
नेपाली गीत सङ्गीतमा नारी हस्ताक्षर सभ्यताको उषा काल देखि नै सायद मान्छेहरु गुनगुनाउथे होला । सङ्गीतको विन्दू ध्वनीसँग सम्बन्धित हुन्छ भनिन्छ, जसलाई शास्त्रले नाद भनेको पाइन्छ । संसारमा गीत सङ्गीत मन नपर्ने मान्छे सायद को नै होला र ? त्यसैले इच्छा, आकांक्षा, चाहाना वा रहर–लहरले गीत सङ्गीतमा विश्वका राजादेखि रङ्कसम्म होमिएका छन् । बिहिवार, माघ २३, २०७६
चलचित्रकर्मीहरुको तात्ने बेला ! चलचित्र रीलीज हुँदा के र नहुदा के भन्नेमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । रीलीज भएपनि दर्शक नआउने र रीलीज नभएपनि नहुनेमा हलवालादेखी निर्माता सम्म सबै चिन्तीत छन् । पौष महिनाभर कुनै पनि नेपाली चलचित्र हलमा लागेनन् । यसले, विशेषगरि नेपाली चलचित्रकै भरमा हल संचालन गरिरहेका हल संचालकहरुका लागि टाउको दुखाइको बिषय बन्यो भने माघमा रलिीज भएका चलचित्रले पनि कुनै लछारपाटो लगाउन सकेनन् । चलचित्र रिलिज भएर दर्शक हलमा नहुँदा चलचित्र बनाउने निर्मातालाई मात्र होइन, सिंगो चलचित्र क्षेत्रलाई नै टाउको दुखाइको बिषय बन्छ । किनकी, चलचित्र ‘छ माया छपक्कै’पछि दर्शकको ठूलो भीड हलमा आउन छाडेको छ । यो चिन्ताको बिषय हो । बिहिवार, माघ २३, २०७६
आस्थाको, अनास्था !!! यो साता गायिका आस्था राउत निकै विवादमा परिन् । काठमाडौंबाट भद्रपूर जाने क्रममा एयरपोर्ट चेक जाँच क्रममा महिला प्रहरी जवानसँग राउतको वादविवाद छताछुल्ल भएर संचारमाध्यम एवं सामाजिक संजालमा पोखियो । आस्था राउतले महिला प्रहरीले गरेको व्यवहार सहन गर्न नसकेपछि फेसबुक भिडियोमार्फत जुन तिक्तता पोखिन खासमा यसैले बिवादको जरो निम्त्यायो । प्रहरी संगठनलाई डन्ठे एवं प्युसो जस्ता शब्द प्रयो गरेकै कारण प्रहरी प्रसासन उनिमाथि खनिन पुग्यो । भलै यो बिषय त्यतिधेरै बादविवादमा आइहाल्ने खालको थिएन । आइतवार, माघ १२, २०७६
जात्रैजात्रा एउटा गीतको भिडियो लोकार्पण कार्यक्रमको तयारी भईरहेको थियो । समारोहमा किङ् गायक, प्रधानमन्त्री गायक, मन्त्री गायक, मुख्य सचिव, सचिव, सह सचिवदेखि खरदार गायक सम्मको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो । सभाहलको एउटा कुनाबाट भर्खर भर्खर सङ्गीत सिक्दै गरेका लगभग एक दर्जन रैती गायकहरु जिज्ञाशु मुद्रामा अतिथिहरुको आगमनलाई नियालिरहेका थिए । आइतवार, माघ ५, २०७६
मुर्दाघाट नपुगोस् चलचित्र ! खासमा चलचित्र विकाश बोर्ड नेपाली चलचित्र उद्योगको सरकारी सर्वोच्च संस्था हो । यसैले चलचित्रलाई चलायमान बनाउन चलचित्र विकाश बोर्डको रवैया के हुने गर्छ भन्ने कुराले धेरै अर्थ राख्छ । वेला बखत राजनैतिक नियुक्तिले वोर्डलाई गाँजेको छ । चलचित्र बुझेका भन्दा राजनैतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति भएका छन् । शैली राजनैतिक वियुक्तिकै होला तर बोर्डको अध्यक्ष चलचित्रकर्मी नै हुनुपर्छ । शुक्रवार, माघ ३, २०७६
नेपाली चलचित्र : हिजो र आज सोमवार, पुष २८, २०७६